Ukwelashwa Sikashukela eChina > Isifo sikashukela
Isifo sikashukela kanye nokwelashwa kwaso
Yabelana ngemininingwane noma ngempendulo yokuthi kusebenza kanjani ukwelashwa kukashukela eChina? Kunemininingwane emincane kakhulu kwi-Intanethi, umuntu athi isifo sikashukela siphathwa ngempumelelo eChina, othile athi kuyisiwula futhi alikho ikhambi eliphelele lesifo sikashukela, izinqubo zaseChinese zizosiza ngokwejwayelekile amazinga ajwayelekile kashukela wegazi, futhi izidakamizwa zingasisekela kuphela.
Yiziphi izivakashi zenkundla ezaziyo imininingwane yokwelashwa kwesifo sikashukela eChina? Imiphi imitholampilo enikeza ukwelashwa okuseqophelweni? (Ngokukhethekile eDali noma eNanmunan) Futhi yini izindleko zokwelashwa nezinqubo? Ngiyabonga kusengaphambili!
Ingabe uthayiphe ushukela ongu-1 osiza eChina noma eTibet
Inna K Julayi 26, 2007 12:48 PM
URuslana Jul 26, 2007 1:01 p.m.
Inna K Jul 26, 2007 1:17 p.m.
UConnie Jul 26, 2007 2:13 p.m.
LenaS Jul 26, 2007 2:29 p.m.
marina Jul 26, 2007 2:40 p.m.
I-Allexus Jul 26, 2007 3:23 p.m.
Okokuqala, ungapheli amandla futhi wesabe isifo sikashukela! Yize lo musho uvinjelwe, kepha ngiyaphinda, ushukela uyindlela yokuphila hhayi umusho! Into ebaluleke kakhulu manje hhayi ukwethuka, hhayi ukubheka "amakhambi nodokotela ngokuyisimangaliso"! Uzochitha imali kuphela, umzamo bese uphuthelwa isikhathi esingasichitha sinxephezelo sikashukela! Ngifuna ukukuxwayisa futhi ngasikhathi sinye ngikuqinise: kulokhu kuxilongwa kunesikhathi sokuxolelwa - i- "i-honeymoon yesifo sikashukela", kulapho isidingo se-insulin sincipha, kwesinye isikhathi kuze kube yilapho umjovo usuqediwe ngokuphelele. Isikhathi siyintantayo, ngalinye lihlukile kusuka ezinsukwini ezimbalwa kuya eminyakeni eminingana. KODWA (lokhu kuyisexwayiso) awudingi ukuthi ucabange ukuthi isifo sikashukela sehlile, khumbula indodakazi yakho, futhi kulokhu, isinxephezelo nokuqashwa njalo kwe-SC (ushukela wegazi) kuyadingeka. Kwesinye isikhathi umuntu ovakashela "odokotela", ephuza amakhambi, efaka izithasiselo zokudla ubona ukuthi i-SK iyenzile eyejwayelekile futhi yenqaba i-insulin nokudla, futhi ikholelwa ukuthi yelashwa, kepha eqinisweni, "i-honeymoon" kanye "nodokotela" beza nezindlela zabo lapha ngokuphelele ngingenzi lutho ngakho. "I-honeymoon" ngolunye usuku izophela, ngeshwa, futhi lapha kuzodingeka ukubuyela ngokungathandeki ku-insulin, nasekwelashweni okuqinisiwe. Futhi kuzophela ngokushesha uma usebenzisa imali ku- “odokotela”, futhi kungekudala uma uxhasa ama-pancreas nge- “sparing” insulin therapy ekhethwe ngobuhlakani, nohlelo lwe-D2000 luzokusiza ngalokhu.
Manje ngalokho engingakutusa:
1) qiniseka ukuthi uthenge i-glucometer bese ukhumula kuyo - thatha izilinganiso ze-SK ngaphambi kokudla ngakunye nasebusuku!
2) funda i-http: //www.juri.dia-club.ru/ ulande uhlelo, zama ukubala ama-coefficients endodakazi yakho, bese ulungisa i-insulin, hhayi ama-carbohydrate! Indodakazi yakho manje idinga ukudla okunekhalori ephezulu!
3) thenga umucu wokuhlola weKeto-Fan noma iDia-Fan, futhi nsuku zonke hlola ukuthi kukhona i-acetone emchameni. Uma i-acetone ikhona, khona-ke kuyadingeka ngokuphuthumayo ukubukeza imithamo yokudla kanye ne-insulin! Ukulaliswa esibhedlela kungenzeka kudingekile ukususa imizimba ye-ketone emzimbeni. (Ungahlola kusihlwa, ebusuku)
I-4) ngincoma ukuxoxa nodokotela wakho ngokushintsha i-Levemir ibe yiHumulin NPH, ngoba iHumulin NPH inomsebenzi owengeziwe we-anabolic futhi izosiza indodakazi yakho ukuba ibe nesisindo! (Kunguye umuthi ongaziwa onesifo sikashukela sokuqala sakwa-Levemir esitholiwe! Ikakhulu ngokuncipha kwesisindo! Ngokuvamile, futhi kunesizathu, ezimweni ezinjalo ukuhlanganiswa kuchaziwe: i-basal (ende) Humulin NPH, bolus (iDemo) i-Humalog.) Ngaphezu kwalokho, ubeka amabili kanye ngosuku!
5) Buza udokotela wakho ukuthi ngabe kukhona yini ama-contraindication ngokuphelele ekusebenziseni amavithamini. Uma udokotela engasho noma engavumeli izizathu zokuphulwa kokuthathwa kwamavithamini, mane uthenge amavithamini akhethekile eziguli ezinesifo sikashukela ekhemisi (DoppelHerz Vitamin for diabetesics, or VitWA APARMA Vitamin for onesifo sikashukela). Thatha la mavithamini, ukuqala nge-tablet-isigamu, njengoba isisindo sendodakazi yakho manje sincane kakhulu, khona-ke ungathatha umthamo ojwayelekile - ithebhulethi ngosuku.
6) Sekela indodakazi yakho ngokuziphatha, ungamvumeli alahlekelwe yinhliziyo futhi agxile kakhulu ezifweni. Uma kungenzeka, phuma ngaphandle, uhambe, uye kumakhonsathi, kumidlalo yaseshashalazini nakwisinema. Uma enendawo ayithandayo, makabuye kuye, amsize ngalokhu. Mthengele ikati! Khetha okungcono ukukusiza wena nendodakazi yakho ukuqala impilo kabusha! Impilo enempilo!
7) Uma unemibuzo, buza esithangamini seDia Club, kunabantu abaningi abadlule kuzo zonke izigaba zokuqala kwesifo sikashukela futhi banokuthile abangabelana nawe.
8 Yebo, ukwehla komthamo - asikho isiguli esisodwa somdlavuza esingalashwa ngosizo lwamakhambi nolunye uhlobo “lwabantu”. Lokhu kungenzeka ukuthi kunabalingiswa bezinganekwane, kukhulunywa ngabo, kepha akekho owabona.
Inhlanhla kuwe nendodakazi YAKHO. Bambelela! Sonke sinani! AWUWONA WONKE - US WONKE.
Umama Jul 26, 2007 3: 29 p.m.
Inganekwane eyodwa elula
Noma mhlawumbe akuyona inganekwane,
Noma mhlawumbe alula
Sifuna ukukutshela. .
Noma mhlawumbe yinja,
Noma mhlawumbe inkomo
Wake waba nenhlanhla. .
futhi uqhubeke nombhalo ..
Umbuzo: Kungani ukusetshenziswa komuthi wamakhambi kuthengiswa eNdiya kungcono ukukhipha i-insulin? Ngabe iyelapha? Manje-ke kungani ingasasetshenziswa kabanzi?
Ayiphilisi, kepha "yehlisa ushukela kuphela, kepha iphansi kahle"? Ngakho-ke "umthamo omuhle" we-insulin ubuye nokuthi "ulunge kangakanani" ukwehlisa i-SC kungahle kungabonakali kukuncane. I-Cheaper? (Kubandakanya ukuthunyelwa kusuka eNdiya) Okuphilayo ngokwasemzimbeni? . hmm.
"Ungabali amadayimane emihumeni yamatshe. Ezimangaliso ezikude zaseNdiya"
IHork ™ Jul 26, 2007 5:22 p.m.
Theark Jul 26, 2007 5:32 p.m.
Odi Julayi 26, 2007 5:43 PM
marina »Jul 26, 2007 7:55 pm
Ngithi angazi. Futhi angazi ukuthi iziphi izakhi kulungiselelwa. Kepha ukubheka nokufunda bekungamangaza. Okungenani - lokho ushukela kunciphisa kakhulu.
Kuthiwani nge-insulin? Akuwona wonke umuntu odinga i-insulin. Kunohlobo lwesibili.
UVasya Jul 26, 2007 8:16 p.m.
Simangele. Futhi ngezwa (ogogo besemnyango betshelwa) ukuthi ukwelashwa komchamo kwehlisa ushukela kahle. Ngabe uzozama?
UVasya Jul 26, 2007 8: 31 p.m.
Kubo bonke abafuna i-Indian-Tibetan-Chinese yasendulo, njll. Imithi nokwelashwa.
Azikho izidakamizwa "zasendulo" nezindlela zokulwa ne-T1DM, futhi kungenzeka nje ukuthi abantu ababanga nazo. Abasindanga nakancane. Kwakungekho muntu wokuphatha.
SD2 kwaba. Ngandlela thile balwa naye. Ukuzivocavoca umzimba, ukudla, ukunciphisa umzimba. KODWA! lokhu kuyinxephezelo efanayo. Ngezinye izindlela kuphela nangemiphumela ehlukile. U-Osho wayene-T2DM, futhi uma engatholanga ikhambi laseNdiya nelamaShayina.
Omunye umzuzu. Lesi sithangami sesibhalise abanesifo sikashukela abangaphezu kwe-1.5 izinkulungwane emhlabeni wonke. Into engingakaze ngiyizwe ngecala elilodwa lokwelashwa.
I-PS angisho ukuthi akufanele uzame. Kepha! udinga ukubona ukuthi kuphi futhi kanjani. Isicelo esikhulu sokusho KUPHELA UKUZE UZIhlolile.
Odi Jul 26, 2007 8:51 pm
Umehluko phakathi kokuphathwa ngesiShayina nokwendabuko
Esinye isizathu esenza ukuthi abantu esihlala nabo bathande kakhulu futhi emishinini yaseChina kungenxa yokuthi, kuze kube muva nje, umuthi waseChinese wahlukaniswa nomhlaba wonke, njengezinye izindawo zezwe. Lapho ikhethini, elicashe kuzo zonke izimfihlo zezindlela zokwelapha ezisetshenziswa esifundeni, lavulwa kancane, wonke umuntu wayenelukuluku lokuthi izindlela zokwelapha ezisetshenziswa eTibet zihluke kanjani kulezo ezinikezwa ochwepheshe baseYurophu.
Umehluko omkhulu phakathi kwendlela yokwelashwa ethandwa eMpumalanga neyasetshenziswa ngochwepheshe bethu ukuthi zonke izindlela zethu zokwelapha zihloselwe kuphela ukuqeda ukugula okungaphansi futhi kunciphise izimpawu zayo. E-China, odokotela bazama ukuhlola isimo esijwayelekile somuntu futhi bazama ukubuyisela impilo yakhe kusixakaxaka.
Ngamanye amagama, lapho benesifo sikashukela banaka umzimba wonke womuntu, hhayi ngesifo esithile.
E-China, bavame ukusebenzisa ezinye izindlela. Uhlobo lokwelashwa oluqinisekiswe ngabaphenyi eCalifornia lithandwa kakhulu - sikhuluma ngamaconsi e-Anti Diabetes Max.
Yonke inqubo yokwelashwa ifaka amasu ayisisekelo anjengalawa:
Ukusetshenziswa kwamafutha abalulekile neminye imikhiqizo ye-aromatherapy.
Ukusetshenziswa kwezitshalo ezikhula ngokukhethekile eChina, lona umuthi obizwa ngokuthi yi-herbal.
Le ndlela yokugcina isetshenziswe isikhathi eside kakhulu. Ngaphezu kweminyaka eyikhulu edlule, le ndlela ayiphathanga nje kuphela isifo sikashukela, kodwa nezinye izifo eziningi. Namuhla, lo mkhuba usetshenziswa emazweni amaningi athuthukile, hhayi eChina kuphela.
Uma wenza ngokunembile ezindaweni ezithile emzimbeni wesiguli, khona-ke ama-pancreas akhe aqala ukusebenza ngendlela entsha futhi akhiqize i-insulin ngesilinganiso esifanele.
Ukuze wenze lokhu, kufanele wazi wonke ama-nuances ayisisekelo ale teknoloji yokwelashwa.
Izinzuzo eziphambili zokwelashwa kwesifo sikashukela eChina
Njengoba kushiwo ngenhla, eChina, uhlobo 1 sikashukela selashwa nge-aromatherapy. Ngendlela ekhethekile, izinhlobo ezahlukahlukene zamafutha abalulekile zilethwa esimweni lapho ziqala ukuhanjiswa. Leli phunga linomphumela wokwelapha empilweni yesiguli. Ngokuyisisekelo, inomphumela onenzuzo ohlelweni lwezinzwa lomuntu, okungukuthi, luvimbela ukubonakala kwazo noma yiziphi izimpawu ezingezinhle ohlelweni lwezinzwa oluphakathi.
Uhlobo oluvame kakhulu lokwelashwa umuthi wamakhambi. Ngale njongo, izitshalo ezithile ziyasetshenziswa ezikhula kuleli kuphela. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuthi ungagcini nje ngomthamo wezidakamizwa olungiselelwe ngesisekelo sazo, kodwa futhi wazi ukuthi ungawulungisa kanjani umuthi onjalo wokwelapha. Ezokwelapha kakhulu yilezo ezilungiselelwe ngesisekelo sezitshalo ezingandile.
Kepha ngaphezu kobuchwepheshe bokwelashwa uqobo, kunezinye izinzuzo, sibonga zona, iziguli ezivela kuwo wonke umhlaba zikhetha umtholampilo eChina. Okusemqoka ukuthi kwenziwe uhlelo olukhethekile eChina ukwelapha isifo sikashukela sohlobo 1 noma uhlobo 2. Imitholampilo eminingi yamukela iziguli ngentokozo ezivela kunoma yiliphi ikhona lePlanethi yethu.
Ochwepheshe kuphela abahamba phambili emsebenzini wabo wasemitholampilo.
Akukhathalekile ukuthi ngabe wukulapha uhlobo lwe-2 yesifo sikashukela noma ukwelashwa kwezifo ezisezingeni lokuqala, indlela yomuntu ngamunye isetshenziswa ezigulini. Ngaphambi kokuqala izindlela zokwelapha eziseduze, odokotela benza ukuxilongwa okuningiliziwe kwesimo sesiguli bese kuphela benquma uhlobo olwaluthandayo lokwelashwa.
Ngenxa yale ndlela evumayo, iziguli eziningi ziqala ukuzwa izinguquko ezinhle empilweni yazo. Kepha into emnandi kakhulu ukuthi ngaphezu kwalesi sifo esiyisisekelo, bayakwazi ukunqoba ezinye izifo ezikhona kuso sonke sikashukela.
Ngempela, ngaphezu kwendlela ebanzi nenomuntu ngamunye, odokotela bahlaziya ngokucophelela wonke ama-nuances okuphila kweziguli zabo. Zonke izibonakaliso noma yisiphi isibonakaliso sokuba khona kwanoma yisiphi isifo kufanele sihlolwe. Ochwepheshe baseMpumalanga bayaqiniseka ukuthi kunezinhlobo eziyishumi nanhlanu zezinkinga ze-carbohydrate metabolism. Vele lokhu kugunyazwa akunakwa ngabodokotela baseNtshonalanga.
Ngemuva kokuthi odokotela bakwazi ukuqonda kabanzi isimo sempilo yesiguli sabo, bazokwazi ukumsiza ngokunembile.
Ungayikhetha kanjani umtholampilo futhi uthole ukwelashwa eChina?
Iziguli eziningi zinentshisekelo embuzweni wokuthi umuntu angakuthola kanjani ngempela ukwelashwa emtholampilo eChina. Ukuzwisisa lokhu ngokuningiliziwe, kufanele uqonde ukuthi zingaki iziguli eziguqukela ezikhungweni zezokwelapha zezwe elinikezwe nokuthi yini eziheha zona.
Ngaphezu kwazo zonke izici ezichazwe ngenhla, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi isifo sikashukela selashwa eMpumalanga kuphela ngemuva kokuxilongwa okuphelele. Ngale njongo, kusetshenziswa ubuchwepheshe obukhethekile besimanje lapho. Le yimishini esezingeni eliphezulu kakhulu ye-ultrasound, MRI, CT, PET nabanye.
Okunye okucacayo ukuthi ochwepheshe boMbuso Wasezulwini basebenzisa ulwazi lwesayensi lwesimanjemanje, bavuselela ulwazi njalo ngabaphilisi basendulo baseMpumalanga. Ungathola esibhedlela igumbi lokuzivocavoca ngokuhlinzwa eduze nedivayisi ye-endoscopic.
Uma ukholelwa izibalo, khona-ke emitholampilo yaseChinese ezigulini ezine-pathologies zivela kabili ngaphansi kweziguli ezathola ukwelashwa ezikhungweni zezokwelapha e-United States noma eYurophu.
Ukwelashwa okunjalo kwesifo sikashukela sohlobo 2 noma uhlobo 1 kunezindleko ezamukelekayo. E-China, lisuka kumadola ayinkulungwane liye kwabathathu. Kepha eYurophu, izindleko ziqala kusuka emaRandi ayizinkulungwane ezimbili nengxenye.
Ngokusekelwe kulwazi lokwelapha lesi sifo kuleli lizwe, singaphetha ngokuthi siqale kuphi ukuzilungiselela kwethu ukusuka siye ezikhungweni zezokwelapha eChina.
Okokuqala, udinga ukuthola umtholampilo onentshisekelo kwi-Intanethi. Namuhla kulula ukwenza, vele uvakashele isayithi elihambisanayo.
Ngemuva kokuthi isiguli sinqunywe ngesidingo sesibhedlela, kufanele uqhubeke ugcwalise amadokhumenti akhethekile. Imvamisa lawa amafomu ajwayelekile aqukethe imininingwane eyisisekelo mayelana nesiguli, imininingwane yephasiphothi yakhe nenhloso yohambo.
Ngemuva kwalokho, kuzodingeka uthenge ithikithi bese ucabanga ngomzila wakho oya edolobheni elithile lapho lesi sibhedlela sikhona.
Lapho befika, odokotela banikeza isiguli isifo esikhethekile, futhi ngokususelwa kwimininingwane etholakele, bahlakulela irekhodi lokwelashwa komuntu ngamunye.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ngemuva kokuthola ukwelashwa, ochwepheshe banquma inkambo ekhethekile yezinyathelo zesiguli ngemuva kokukhululwa.
Ngabe ukwelashwa kwenziwa kanjani kuye ngezindlela zaseChina?
Ngokuya ngemiphumela yokuxilonga, isiguli ngasinye sinqunyelwe amalungiselelo athile enziwe kuphela ngesisekelo sezitshalo.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi iphilisi elifanayo lingabekwa elinye, bese liphulwa elinye. Ngakho-ke, kulokhu, singasho ngokuphephile ukuthi indlela yokwelapha kubo bonke ihlukile.
Isiguli sinqunywe inkambo ekhethekile ye-acupuncture noma i-cauterization. Esinye isici somuthi waseTibetan ukubhucungwa umzimba. Lezi zingaba imassage ehluke ngokuphelele okuhloswe ngayo ukubuyisa umsebenzi wezitho ezahlukahlukene zangaphakathi, kufaka phakathi namanyikwe.
Kusenendlela efana ne-qigong. Yakhiwa ngamakhosi esikole esidala saseWudang futhi ivumela izinyanga ezimbili noma ngaphezulu kwezinyanga ezintathu ukukuyeka ngokuphelele ukusetshenziswa kwanoma yiziphi izidakamizwa.
Cishe zonke izikhungo zezokwelapha eziseMiddle Kingdom zinezixhobo zesimanje kakhulu. Baqasha odokotela abangochwepheshe nabanolwazi kuphela.
Isibhedlela samasosha eDali sifakwe imishini enjalo. Basebenzisa izindlela zakamuva zokuvivinya umzimba ukuze basize ukubuyisa ama-pancreas. Benza nokwelashwa kwe-stem cell.
Ama-stem cell nawo aphathwa kwezinye izikhungo eChina. Lolu hlu kufanele lufake isibhedlela sasePuhua naseBeijing.
Kepha eCentre for Tibetan Medicine, eseBeijing, basebenzisa izindlela ezingokwesiko zokwelapha umuthi waseShayina. Iziguli ezitholakala zinesifo sikashukela sohlobo 1 noma uhlobo 2 ziyavunywa lapha.
Abaningi babahambeli bethu bakhetha isikhungo sase-Ariyan, esisedolobheni lase-Urumqi. Izindiza eziqondile zishiya lapha zisuka eMoscow, ngakho-ke ukuya esikhungweni kulula kakhulu.
Ngaphezu kwezindlela ezahlukahlukene zokwelashwa, umuthi waseChinese unenqubomgomo yentengo engabizi. Izikhungo zisebenzisa kuphela imishini yokuqamba nezindlela ezintsha zokwelapha. Ukuqhathanisa, ukwelashwa kwesifo sikashukela eJalimane kuzobiza kakhulu izikhathi ezingama-2-3, uma nje izinsiza ezikhona ezweni ziyefana naseMbusweni Wasezulwini.
Ungaphinde ufunde izibuyekezo, zazo kukhona okuningi ku-inthanethi futhi, ngokususelwa kuzo, khetha isikhungo sezokwelapha ngenhloso yakho.
Isazi sevidiyo esikulesi sihloko sitshela ukuthi isifo sikashukela siphathwa kanjani eChina.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela eChina ngemithi yesimanje yaseNtshonalanga
Ukuze ukwelashwa kwesifo sofuzo nokutholakala kwesifo sikashukela kuChina kuphumelele ngangokunokwenzeka, kusetshenziswa izindlela eziphambili zokuxilonga:
ukuhlolwa kwelebhu esezingeni eliphezulu,
Kunakwa kakhulu ukuqapha i-glucose egazini lesiguli nokuntuleka kwe-insulin.
Ucwaningo lwakamuva lwesayensi lufake isandla kakhulu ekwelashweni kwesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2 eChina.
Akugcinanga nje ngokuba ntofontofo futhi mnene, kepha futhi kunomphumela wesikhathi eside ngisho nasezimeni ezinzima kakhulu.
Odokotela baseChinese basebenzisa uhlobo lwakamuva lokwelapha isifo sikashukela - Ukwelashwa kwe-MDM. Ukuvezwa kobuchopho ngesiginali kagesi esibuthakathaka kusebenze uhlelo lwe-neuroendocrine futhi kuqede ukwehluleka kwezinqubo ze-metabolic. Umzimba uhlela kabusha umsebenzi wawo ezingeni lamaselula. Le ndlela esebenza kahle ngokuvamisile iba yithuba kuphela lokuthola iziguli ezikulesi sigaba.
Imiphumela Yezindlela Ezinhle Zokwelashwa Sikashukela eChina Inikeza Ukwelashwa kwe-laser futhi i-cryosauna. Izinqubo zenziwa ngemishini emisha yaseJapan eyenziwe yasungulwa eminyakeni yamuva. Ama-pancreas athola umfutho wokwelapha onjalo wokuthi imisebenzi yawo ibuyiselwe ngokuphelele, ukukhiqizwa kwe-insulin, inani lomoya-mpilo egazini nezicubu ziyanda. Kulesi simo, asikho isidingo sokuthatha imishanguzo, sibhekana nemiphumela emibi yamakhemikhali.
Uma kungezwedlule izinyanga eziyi-6 kuqalile lesi sifo, khona-ke indlela yezemvelo yezempilo kanye nemishini yesizukulwane esisha izokwelapha emaphathini angama-97%!
Uma kunokuthile ongangeza ngesihloko, noma ungabelana ngolwazi lwakho, sitshele ngakho ukuphawula noma ukukhumbula.
UKUXHUMANA KUKHONA KUKUFINYELEKILE, KUFUNEKA UKUXHUMANYANA KOMSEBENZI
Iziguli ezivela emazweni ayengaphansi kweSoviet Union ziya ngokuya ziphendukela kwa-Israyeli ukuthola ukwelashwa kwethambo. Kuyasiza ukubuyisa umzimba ngokuhlinzwa ubucwebe, ubuciko be-laser, umuthi. Uma unomuzwa wokuthi "umhlaba uwele ekhanda lakho," uthola ukukhathala okungapheli, ukozela kanye nokuthokoza ngokweqile kwemizwa, khona-ke sincoma ukuthi uhlolwe ngabakwa-endocrinologists bakwa-Israyeli. Kubhekelwa kakhulu ekwelashweni komdlavuza we-thyroid kwa-Israyeli. Ukusebenza kwenziwa ekugcineni. Esikhathini sokuqala, i-hemithyroidectomy (ukususwa kwethambo lesitho esithintekile) kukhonjiswa, ngenqubo yokuqalisa, ukususwa ngokuphelele kwe-yegland yegilo ngokubonakala kwama-lymph node wesibeletho kunesizathu. Ngemuva kwe-1, 5 izinyanga ngemuva kokuhlinzwa, baphathwa nge-iodine e-radioactive. I-Israyeli inesilinganiso esiphakeme kakhulu sokusinda somdlavuza we-yegilo. Funda kabanzi enkampanini "MedExpress".
Ukuhola imitholampilo phesheya
ENingizimu Korea, eSeoul
Ochwepheshe abaholayo bemitholampilo phesheya
USolwazi Ofer Merimsky
USolwazi Ulf Landmesser
USolwazi Sung Hung Noh
UDkt. Alice Dong
Umuthi waseChina wokulwa nesifo sikashukela
Ngokuthabisako, umuthi wendabuko waseChinese uhlukanisa ngezinhlobo eziyishumi ezahlukahlukene zesifo sikashukela. Mhlawumbe yingakho odokotela baseChinese bexilonga ngokucophelela ngaphambi kokuqala ukwelashwa. Ukwelashwa kwesifo sikashukela kuhlala kuyinkimbinkimbi.
Imikhiqizo yendabuko yamaShayina ibonwa emhlabeni jikelele. Zisebenza ikakhulukazi ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo 2. Imiphumela yokuhlolwa kukhombisa ukuthi ukusetshenziswa okufanayo kwalezi zidakamizwa nezidakamizwa zesimanje zokwehlisa ushukela kunciphisa zonke izimpawu ezingemnandi zesifo sikashukela futhi kunciphisa kakhulu ingozi ye-hypoglycemia. Ngohlobo 1 sikashukela, inkomba ebaluleke kakhulu yempumelelo yokwelashwa ukwehla komthamo wansuku zonke we-insulin.
Ukuhlolwa ngokuhlolwa kwezimo zomzimba nezengqondo, kufaka phakathi umbala wamehlo, isimo sesikhumba,
Ukuxilonga izindlebe, ulimi, amazinyo, i-iris.
Ngokusekelwe esivivinyweni, kuhlanganiswa inqubo yokwelashwa yomuntu ngamunye. Ukwelashwa kwesifo sikashukela, umuthi waseChinese usebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zokugcoba, i-acupuncture, amakhambi amakhambi, kunakwa kakhulu ekunakekelweni kwezempilo komtholampilo.
Kubhekelwa kakhulu eChina ukwenza ngcono ukuhanjiswa kwegazi ukuze kutholwe izitho zomzimba ikakhulukazi ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo 1. Kulokhu, umsebenzi oyinhloko ukuvimbela ukuqhubeka kwesifo.
Imitholampilo yase China lapho kuphathwa isifo sikashukela
Isikhungo sezokwelapha saseKerren. Enye yezikhungo zezokwelapha ezaziwa kakhulu eChina maqondana nempumelelo ekwelashweni kwesifo sikashukela yiKerren Medical Center. Itholakala eDali. Odokotela abaqeqeshiwe kakhulu basebenza lapha.
Isibhedlela Sempi Yezwe. E-Dalian, ungathola nokwelashwa kwesifo sikashukela ezinganeni nakubantu abadala esibhedlela Sempi Yezempi. Isibhedlela sihlonyelwe izikhungo zanamuhla kakhulu, ezihambisana nokwelashwa kwendabuko, ezinikeza umphumela omuhle. Kunakwa kakhulu ekuzivocavoca umzimba okhethekile. Ngaphezu kwalokho, lesi sibhedlela sisebenzisa indlela yokwelashwa emisha (kufaka phakathi isifo sikashukela) sisebenzisa ukuthungwa kweseli.
Isibhedlela sasePuhua International. IBeijing International Hospital Puhua inikezela nangezindlela zokwelashwa ngamaselula.
Isikhungo Sokwelapha saseTibetan. I-Center for Tibetan Medicine eBeijing inesethi enkulu yezindlela zendabuko zaseShayina zokwelapha isifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2.
Isibhedlela i-Ariyanyan e-Urumqi. Idolobha lase-Urumqi, isikhungo sezokuphatha sesinye sezifunda ezisenyakatho yeChina, selibe idolobha elithandwa kakhulu kubavakashi bezokwelapha abeza eChina. Ukusuka eMoscow, izindiza eziqondile ezijwayelekile zihlelwe lapha kaningana ngesonto. Ungathola ukwelashwa kwesifo sikashukela e-Urumqi ezikhungweni zezempilo zomasipala eziningana nemitholampilo yangasese. Isikhungo sezokwelapha esikhulu kunazo zonke esinikezela ukunakekelwa kwesifo sikashukela esibhedlela i-Ariyan City 1st.
Inkambo yokwelashwa kwesifo sikashukela eChina ngezindlela zendabuko izothatha cishe ama- US $ 1600-2400 ngokwesilinganiso samaviki ayi-2.
Odokotela baseChinese bathi ngokubambelela ngokuqinile kuzo zonke izincomo futhi kulandela izinqubo ezibekiwe, isidingo somzimba soshukela silawulwa ngalesi sikhathi futhi negazi laso liyancipha. Noma kunjalo, izifundo kufanele ziphindwe ngezikhathi ezithile. Kungemva kokudlula kwezifundo ezingama-3-4 zokwelashwa lapho umphumela wokugcina ungatholakala.
Ukwelashwa kweselula kuyabiza impela: $ 35,000-40000 ngenkambo ngayinye isikhathi esingangenyanga.
Imininingwane mayelana nemitholampilo elapha i-cerebral palsy e-China. Izindlela zokwelapha emitholampilo yaseChinese.
Funda kabanzi mayelana nokwelashwa e-Dali lapha. Imikhombandlela yokwelashwa kanye namanani entengo yawo e-Dali.
Isixhumanisi esilandelayo imayelana nokuya eChina nokwelashwa https://mdtur.com/region/china/lechebnye-tury-v-kitaj.html. Uhambo lwezokwelapha oluya eChina lusuka eMoscow naseKhabarovsk.
Ngokuyisisekelo, ukubuyekezwa kweziguli ezelashelwa isifo sikashukela eChina kuyinto enhle, kufaka phakathi ukwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 1 ezinganeni, nazi ezinye zazo:
Ngeshwa, asitholanga ukwesekwa okufanele eMoscow mayelana nokwelapha isifo sikashukela sohlobo loku-1 endodakazini yethu. Isimo sengane besihlala siba sibi kakhulu. Kwanqunywa ukuthi kuyiwe eChina. Ngangihlatshwa umxhwele ukuqunjelwa okuningiliziwe nemininingwane yokuphenywa ngodokotela. Ukwelashwa okuqhubekayo. Kancane kancane uSasha waba ngcono. Manje silungiselela isifundo sesibili. Udokotela wethu unesifiso njalo ngesimo sengane, ukuxhumana nathi nge-imeyili.
Umama welashwa isifo sikashukela sohlobo 2 eChina. Bazicacisele kahle zonke izingqinamba zokuxilongwa nokwelashwa, ezikhethwe ngokucophelela. Ekuqaleni kwakunzima kuye, ngoba ngaphezu kwezinqubo eziningana ngosuku, ukuvivinya umzimba kuyimpoqo, okuyinto umama wami angajwayele. Kodwa-ke, ngenxa yalokho, waba ojabule ngokwengeziwe futhi wayenethemba elikhulu.
Bheka isigaba se-Endocrinology ukuthola eminye imininingwane.
Izici zokwelashwa kwesiShayina
Izibhedlela kanye nezibhedlela eChina ziyizikhungo ezimangalisayo, ukusebenza ngempumelelo kwezokwelapha okuye kwaqinisekiswa yiziguli eziningi. Izindlela zokwelapha isifo sikashukela zisuselwa ekusetshenzisweni ngempumelelo nasekufundeni okuhle kwempumelelo yakamuva yaseNtshonalanga kwezokwelapha, kuhlanganiswe nokwelashwa kwendabuko nezidakamizwa okususelwa kwizakhi zamakhambi ezivela imvelaphi yezilwane, njll. Le ndlela ihlinzeka ngempumelelo ephezulu yokwelapha ngobungozi obuncane empilweni yeziguli.
Izwe selivule inqwaba yezikhungo zezokwelapha ezikhethekile nezinamalayisense: zombili izinhlaka ezihlangene futhi eziqondiswe ngqo. Ngokuya ngezinga lesifo sikashukela mellitus, amakhono ezezimali kanye nezimpawu zomuntu ngamunye, umuntu ngamunye uzokwazi ukukhetha isikhungo esimlungele.
Abantu abangakwazi ukuvakashela izikhungo zezokwelapha zendabuko zaseYurophu, i-United States of America ne-Israel nakanjani kufanele baye eChina, lapho ukwelashwa okusebenzayo kubiza khona okuncane.
Izindlela zokuxilonga nokwelapha isifo sikashukela ziyehluka ngokuya ngesibhedlela esikhethiwe. Kodwa-ke, noma yisiphi isikhungo sibambelela ezinhlosweni ezifanayo:
Ungayiqedi imiphumela, kodwa imbangela yesifo. Ochwepheshe bezokwelapha baseShayina bavame ukuhlobanisa ukuthuthukiswa kwe-pathology nokwephulwa kokusebenza okujwayelekile kohlelo lobuchwepheshe. Odokotela babheka umzimba womuntu njengohlelo olulodwa futhi banquma uhlobo olufanele lokwelashwa oluthuthukisa isimo sohlelo olunye lwesitho ngaphandle kokulimaza elinye.
Ukudambisa isimo sesiguli. Izidakamizwa ezinqunyelwe kanye ne-physiotherapy zenza umsebenzi obaluleke ngokulinganayo - zigcina ikhwalithi yempilo yomuntu esezingeni elanelisayo nelungile.
Shintsha amazinga kashukela. Ngenxa yokufinyeleleka okujwayelekile kwezinqubo ze-metabolic, ukwehla kwesisindo somzimba, ukuphuculwa kwesimo sempilo esijwayelekile kanye nokwenza ngcono kwazo zonke izinhlelo zomzimba, izinga likashukela lehla lize lifinyelela kwizigidi eziyisithupha zamalitha ngelitha legazi futhi lihlala lizinzile.
Yikuphi ukuxilongwa okwenziwa eChina?
Indlela esheshayo nethembekile kunazo zonke yokuthola uhlobo 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela, ngisho nasezigabeni zokuqala, ukuhlolwa kwegazi nge-glucose, lapho kwenziwa izivivinyo ezingeziwe kulokho okubalulekile:
umaki we-carbohydrate metabolism
ukuhlolwa kwama-hormone, ama-autoantibodies, umaka wezifo.
Funda kabanzi mayelana nokuthi kutholakala kanjani ukuthi isifo sikashukela eselabhoratri, lesi sihloko sizosho.
Ukunquma ngokunembile isimo jikelele sempilo yesiguli, funda ngezimpawu zakhe ezithile futhi ahlaziye umsebenzi wezitho zangaphakathi nezinhlelo, umuntu ukhonjiswa indlela yezifundo ezengeziwe:
umbala we-ultrasound wezitho zangaphakathi,
ukuskena kathathu kwemithambo yemikhawulo engezansi,
i-compute, i-magnetic resonance kanye ne-positron emission tomography,
Ngokuya ngecala ngalinye lesifo kanye nesiguli, uhlu lwezibalo zelebhu nokwelashwa kungandiswa futhi kuncishiswe.
Ukuqokwa kwesifo sikashukela esimfanele yizidakamizwa zendabuko ezisuselwa kwizithako zemvelo - isisekelo sokwelashwa kwesifo sikashukela ePeople's Republic of China. Imithi ikhethwa ngokwesisekelo senhlala-kahle yesiguli, ushukela kanye nemiphumela yezifundo zokuxilonga.
Ngaphezu kokwelashwa kwezidakamizwa, izinqubo zomzimba ziyasetshenziswa ekwelapheni:
Zhen-Chiu ukwelashwa. Kungumthelela ezingxenyeni ezithile zomzimba usebenzisa izinaliti ezikhethekile nge-conuteritant cauterization. Ukwelapha kuyasebenza impela, futhi izimfanelo ezinhle ezibonakalayo ziqashelwa ngemuva kwezinqubo zokuqala cishe kuzo zonke iziguli.
I-Acupressure massage. Lokhu kuyindlela yokuvezwa kwamaphoyinti omzimba okusebenza komzimba ngeminwe.
Qigong Kuhlelo lokuphefumula nokuzivocavoca umzimba, oluhlotshaniswa nombono wenkolo wezindela zase Taoist.
Lapho uzijwayeza i-qigong izinyanga ezingama-2-3, abanesifo sikashukela bangayishiya ngokuphelele imishanguzo yendabuko noma banciphise ukusetshenziswa kwayo.